Xiangshan Chaoyu Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd. itholakala kwelinye kazwelonke izifunda phezulu 100 Zhejiang Isifundazwe Xiangshan County Industrial Park, Xiangshan nhlonhlo yidolobha elihle ezijulile. It Friend ku Hangyong onguthelawayeka is kushintshwe, ezokuthutha Kuyinto elula kakhulu.
Okwamanje, le nkampani ihlanganisa indawo afika ku-1 million square metres. Nge eziphambili imishini yokukhiqiza. Ngemva Eminyakeni yamuva, ne ukuthuthukiswa okuqhubekayo nokuthuthukiswa, ukwakha iqoqo elisha imigqa ukukhiqizwa zokuthuthukisa umkhiqizo ezisebenza uqine yokuthengisa inethiwekhi kwelinye ezikhethekile base ukukhiqizwa iKhabhinethi.
Le nkampani ine amandla eqinile lobuchwepheshe, ephelele mechanical processing imishini, izinga lomkhiqizo, emva-sales service kuthiwa ngezindinganiso ISO9000 ngamazwe ukuphathwa, ukunikeza amakhasimende imikhiqizo nezinsiza esezingeni eliphezulu. Ngesikhathi esifanayo, inkampani ukugxila ubuchwepheshe ngcono nokuthuthukiswa entsha umkhiqizo, ukuze umkhiqizo otholakala endaweni ehamba phambili embonini.
Inkampani kuyoba eliphezulu, intengo ephansi futhi inkonzo Cabangisisa njengoba inhloso yebhizinisi. Kulesi, inkampani zonke izisebenzi zale nkampani ukuze ukunakekela nokusekela amakhasimende yenkampani kanye nozakwabo ukuze ngibonge okusuka enhliziyweni!